Posted by: Zakariya in Dhanbaallada April 8, 2016	0 2,119 Views
Wardhiigleey, Muqdisho (HIMILONEWS) – Waxaa tahay iftiin maalin waliba ii soo baxa. Aragtidaada ayaan ku istereexaa. Ma ogid miyaa inaad laabtayda ku beertay ashqaraar iyo farxad. Ma ogid miyaa inaad tahay hadiyad xagga Ilaahay layga soo diray si ay ii daryeesho.
Hambalyo! Waxaa tahay gabadhii nolosha. Tanina waa farxadayda koobaad. Waxaan sugayaa maalinta aad igeyn doonto aduunyo cusub iyo nolol cusub. Maalinta noloshayda. Maalinta noloshaada. Waxaa kaa fishaa inaad nolosha dhexdeeda igula noolaato kalsami. Mahad ayaan kuu qiray Eebe kasokow. Tanina ma ahan waxaan ka ahayn jaceyl aan xusuustayda ka go’ayn.
Waxaan dhawrayaa inaad naftayda ku camirto naxariis iyo galgacal. Gebi ahaan waxaan jeclahay inaad ii faraxsanaato. Ii ogolow inaan ku dhaho hadal dabacsan oo ay kudheehan tahay wanaag iyo toolmooni. Kuuna soo gudbiyo caleemo qoyan.
Maanka ii daji. Tii ay doorteen caqligayga, maankayga iyo naftayda, Eebe ha ii kaa barakeeyo. Maxay kuu dooran waayeen, kol hadii ay kugu xasilaan, kugu doogsadaan, kuguna dagaan.
Ii kaalay qalanjadii iyo geenyadii hablahaay oo ahaw mid ku harsan laabtayda. Waxaa maankayga farxad galinaya inaad kamid tahay kuwa ashaxa iyo hidaha toosan ee diinta ku barbaaray, una hogaansan Ilaahay. Qalbigayga wuu faraxsan yahay waayo adiga ayaa kujira.
Waan ku jeclahay adiga ayaana I baray inaan kujeclaado. Waan faraxsanahay adiga ayaana ibaray farxada. Qof ay naftaydu huri weysay ayaa tahay. Naftayda ayaan kuu hibeeyey. Waxaan diyaar kuula ahay inaan nolosha heer sare ku gaarsiiyo.
Aniga la’aantaa waxba ma ihi. Noloshayda adiga ayey kaa bilaabataa. Adiga ayeyna kugu dhamaataa. Adiga ayaa igu filan.
Ifka noloshu waa adiga!!
Previous: Waa Gabar 3 Sano Jir ah oo Ka Go’day Cuntadda iyo Cabitaanka
Next: Ma dareentaa qiimaha maamulka?–Qoraa: Abdullahi Hussein Farah